लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको बहुमत गुम्यो, संसदमा भने बमोजिम राजीनामा देलान् त ? लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको बहुमत गुम्यो, संसदमा भने बमोजिम राजीनामा देलान् त ?
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको बहुमत गुम्यो, संसदमा भने बमोजिम राजीनामा देलान् त ?
बुटवल । शुक्रबार दिउँसो लुम्बिनी प्रदेशकी राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिईन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेकी उनले सरकारमा जसपाको सर्मथन नरहेकोले राजीनामा दिएको बताइन् ।
सुमनले छाडेसंगै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत जेठ २८ गते संसदमा सम्बोधन गर्दै बहुमत गुमे एक मिनेट पनि सत्तामा बस्दिन भनेर भाषण गरेका थिए । यतिबेला जनताको चासोको विषय बनेको छ, मुख्यमन्त्रीले भने बमोजिम अब राजीनामा देलान् त ?
लुम्बिनीमा कुल ८३ सांसद छन् । जसमध्ये सत्तारुढ एमालेका ३८ जना छन् । जसपाका ४ जना सांसद सरकारमा हुँदा सरकारको पक्षमा बहुमत थियो । तर, राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामासँगै सरकारको पक्षमा ४१ जना सांसद मात्र हुन पुगेका छन् ।
सरकारलाई बहुमत पुग्न कम्तीमा ४२ सांसद चाहिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा छन् ।
यता, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । राज्यमन्त्रीको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाए पछि राजिनामा दिनुपर्ने उनको माग छ । -नागरिक अनलाईनको सहयोगमा